Maurizio Sarri Oo Shaaciyey Weeraryahanka No 9 U Xidhan Doona Chelsea Xili Ciyaareedka Dambe – Latest Sports News
Maurizio Sarri Oo Shaaciyey Weeraryahanka No 9 U Xidhan Doona Chelsea Xili Ciyaareedka Dambe
Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea, Maurizio Sarri ayaa shaaciyey weeraryahanka kooxdiisa hoggaamin doona xili ciyaareedka dambe, kaddib markii ay Atletico Madrid ka iibiyeen Alvaro Morata isla markaana ay amaah lix bilood ah Juventus kaga soo qaateen Gonzalo Higuain.
Weeraryahanka reer Argentine ee Higuain ayaa xidhay funaanadda lambarka 9, laakiin su’aasha lays waydiinayo ayaa ah cidda booskiisa buuxin doonta marka uu dhamaado waqtiga kooban ee uga hadhay heshiiskiisa Blues uu kula jiro, balse tababare Maurizio Sarri ayaa haddaba ku wargeliyey taageereyaasha ciyaartoyga ay sugi doonaan inuu safkooda hoggaamiyo.
Maurizio Sarri waxa uu sheegay in Higuain oo ay da’diisu tahay 31 jir, isla markaana afar gool u dhaliyey 12 ciyaarood oo uu u saftay uu sii joogi doono xili ciyaareedka dambe oo uu sii xidhnaan doono funaanadda No. 9.
Sarri oo markii ay dhamaatay ciyaartii ay shalay barbar-dhaca la galeen Manchester United la waydiiyey in Higuain uu sii joogo doono Stamford Bridge xili ciyaareedka, ayaa waxa uu ku jawaabay: “Haa wuu sii joogayaa. Way adag tahay in lala qabsado Premier League, laakiin waxay ila tahay in xili ciyaareedka dambe uu bilaabi doono inuu goolal badan dhaliyo.”
Maurizio Sarri waxa uu tilmaamay in ciyaartooyo badan oo weerarka ah ay ku adkaatay xilli ciyaareedkoodii ugu horreeyey inay la qabsadaan horyaalka waddanka Ingiriiska laakiin ay markii dambe si fiican ula jaan-qaadeen, waxaanu yidhi: “Weeraryahannada way ku adag tahay inay la qabsadaan Premier League. Waxaan xasuustaa markii Suarez uu tegay Liverpool. Xili ciyaareedkiisii hore wuxuu dhaliyey saddex gool, midkii xigayna 16 gool, midkiisii saddexaadna 24 gool.”
Heshiiskii ay Chelsea bishii January kusoo qaadatay Higuain ayaa waxa uu dhigayay in haddii kooxda reer London ay go’aansato in heshiiska amaahda ah ay u beddesho mid rasmi ah inay bixiso lacag dhan 36 milyan oo Euro oo loo shubo Juventus, amaba 18 milyan ay ku bixiso xili ciyaareedka kale oo kaliya haddii ay haysanayso.